Izindaba - Uma usebenzisa umshini wokunquma ukukhiqiza, inqubo yokunquma kufanele inakwe futhi akumele ithathwe kalula.
Iselula / Whatsapp / Wechat / Ucingo:+86 18858875050 Imeyili: fangyongmachine@gmail.com
Umshini Wokuvikela I-extrusion
Umshini Wokuphrinta weFlexo
Udoti Bag Ukwenza Machine
Glove Ukwenza Machine
Isikhwama Ukwenza Machine
Shoe Cover Ukwenza Machine
Shower Cap Ukwenza Machine
Side Ukubekwa uphawu Ngezansi Isikhungo Sokufaka Umshini
Lapho usebenzisa umshini wokunquma ukukhiqiza, inqubo yokunquma kufanele inakwe futhi akumele ithathwe kalula.
Lapho usebenzisa umshini wokunquma ukukhiqiza, inqubo yokunquma kufanele inakwe futhi akumele ithathwe kalula. Ngakho-ke, le ndatshana izohlanganisa ifilimu elihlanganisiwe le-BOPP / LDPE elihlanganisiwe, izinkinga zekhwalithi ezenzeka kwinqubo yokukhiqizwa kokunquma kanye nezinkinga ezihlobene zomshini wokunqamula ozozihlaziya.
1. Lawula ijubane lokusika
Lapho ufaka ukukhiqizwa okujwayelekile, isivinini somshini wokusika kufanele silandele ngokuqinile izidingo zenqubo. Ukuphakama kakhulu kuzophinde kuthinte ikhwalithi yokusika. Ngakho-ke, ngokulawula isivinini sokunquma, ikhwalithi edingekayo yokunquma ingatholakala. Ngoba, ekukhiqizweni, abanye opharetha bakhulisa ngesivinini isivinini sokusika ukuze bandise okukhiphayo futhi bathuthukise izinzuzo zabo zezomnotho. Lokhu kuzokwenza ifilimu ithambekele ekujuleni kwemigqa emide nezinkinga zekhwalithi yongqimba phakathi kokusebenza ngejubane.
2. Khetha inqubo efanelekile yokusika ngokuya ngemishini nokusebenza kwefilimu
Ekukhiqizweni okujwayelekile, kuyadingeka ukusebenzisa ubuchwepheshe obufanele bokusika ukukhiqiza ngokuya ngokusebenza kwemishini, izakhiwo zangaphakathi zefilimu, nezinhlobo ezahlukahlukene nokucaciswa kwefilimu. Ngoba imingcele yenqubo, izindlela zokuhlonza, kanye namagugu amafilimu ahlukanisiwe ahlukile, inqubo kufanele ilungiswe ngokucophelela kumkhiqizo ngamunye.
3. Naka ukukhetha okufanele kwezindawo zokusebenzela
Ekukhiqizeni, imvamisa yokusetshenziswa kwesiteshi ngasinye se-slitter ihlukile, ngakho-ke nezinga lokugqoka nalo lihlukile. Ngakho-ke, kuzoba nomehluko othile ekusebenzeni. Isibonelo, kunemivimbo embalwa emi mpo yemikhiqizo yokunquma isesimweni esingcono. Ngokuphambene nalokho, kunemivimbo eminingi engaphezulu. Ngakho-ke, opharetha ngamunye kufanele anake ukukhetha okufanele kwezindawo zokusebenzela, anikeze ukudlala okugcwele esimweni esihle kakhulu semishini, abambe ukusetshenziswa kwendawo, ahlale efingqa ulwazi, futhi athole ukusetshenziswa kwezici ezinhle kakhulu zensimbi.
4. Qinisekisa ukuhlanzeka kwefilimu
Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashelwe ukuthi ngesikhathi sokuqhekeka, umqulu ngamunye wefilimu uyavulwa bese ubuyiselwa emuva, okudala izimo zokungena kwezinto zangaphandle. Njengoba umkhiqizo wefilimu uqobo usetshenziselwa ukupakisha ukudla nemithi, ngakho-ke, izidingo zenhlanzeko ziqinile kakhulu, ngakho-ke kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi umqulu ngamunye wefilimu uhlanzekile.
Indawo Ephansi Yezimboni YaseHengtang, Yaru Village, iShangwang Street, Idolobha laseRuian, Isifundazwe saseZhejiang, China
Iselula / Whatsapp / Wechat / Ucingo:+86 18858875050